မောင်မောင်က bitcoin လိပ်စာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့12345 ကို လှူလို့ရပါတယ်ဆိုပြီး အလှူခံတယ်ဆိုပါဆို့။ ဒါဆိုရင် လူတွေက12345 ထဲမှာ bitcoin ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာရော အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ ဘယ်အကောင့်ဆီက ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အဝင် ဘယ်အကောင့်ကို ဘယ်လောက်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့အထွက် ဒါတွေအကုန်လုံးကို လူတိုင်းကမြင်ရမှာဖြစ်လို့ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ decentralized ဖြစ်နေတဲ့ distributed ledger ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ အသေးစိတ်ကို Bitcoin ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ မှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကောင့်ကိုဘယ်သူကမှ လာပိတ်လို့မရပါဘူး။…
အခုပြောမဲ့ အကြောင်းကတော့ Bitcoin ကို နည်းပညာအရဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာ နားလည်သလောက်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးအရတွေ ဝယ်သင့်မဝယ်သင့်ဆိုတာတွေကို ရှင်းပြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Crypto currency တစ်ခုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ဆိုတာကို Bitcoin နဲ့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
Bitcoin ဆိုတာ centralized server မပါပဲ peer to peer ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ငွေကြေးစနစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း centralized server မပါပဲ p2p သွားတာ security issue တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဘာကိုမှယုံလို့မရပါဘူး အဲ့ဒါကို Bitcoin က decentralized system ကြီးမှာ ဘယ်လိုဖြေရှင်းထားလဲဆိုတာကို ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး Bitcoin ကိုသုံးဖို့အကောင့်ဖွင့်တာ တစ်ခြား website တွေ app က registration system နဲ့လုံးဝမတူပါဘူး။ Bitcoin account တစ်ခုရှိဖို့ကို private key တစ်ခု generate လုပ်ပြီး သုံးယုံပါပဲ။ ဒီထွက်လာတဲ့ private key ကို Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) ကိုအသုံးပြုပြီး public key ထွက်လာပါတယ်။ အဲ့တော့ public key မေ့သွားရင် private key ကနေတစ်ဆင့် generate ပြန်လုပ်လို့ရနိုင်ပေမဲ့ private key ပျောက်သွားရင် ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး။ public key ကကိုယ့်ရဲ့ bitcoin address ဖြစ်လာပါတယ်။…
ဟုတ် ကျွန်တော်ပြောမှာ နိုင်ငံရေးအကြောင်းပါ
Edit: ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှာ မအလတွေအာဏာသိမ်းသွားတဲ့အတွက် အော်ကကစာအရှည်ကြီးက အသုံးမဝင်တော့ပါ >.<
ထူးထူးဆန်းဆန်း နိုင်ငံရေးအကြောင်းရေးတယ်မထင်ပါနဲ့ နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားက ငယ်ငယ်ထဲကပါ။ နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တာလဲသိပ်မရေးဘူးပါဘူး။ လုံးဝမရေးဘူးဘူးဆိုရင် ပိုပြီးမှန်လိမ့်မယ်။ အခု ၂၀၂၀ လဲ နီးလာပြီဆိုတော့ တွေးမိတာတွေလေးရေးကြည့်ချင်လို့ပါ။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအများစုမှာတွေ့ရကတော့ အခြေခံဥပဒေ ဘယ်လိုကွာကွာ လွှတ်တော်ထဲမှာ ၂ ပါတီပဲ ပြိုင်ကြတာပေါ့။ အကြမ်းဖျဉ်းခွဲမယ်ဆိုရင် လွတ်လပ်ခွင့်၊ လူအခွင့်အရေးအစရှိတာတွေကို အလေးပေးတဲ့ လက်ဝဲ နဲ့ အမျိုးသားရေး၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို ဦးစားပေးတဲ့ လက်ယာ ဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွဲလို့ရတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆို ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ ရီပါဗလစ်ကန်ပါတီ နှစ်ခုပေါ့။ ဗြိတိန်မှာဆို လေဘာပါတီနဲ့ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါရီပေါ့။ လက်ဝဲ လက်ယာဆိုပေမဲ့ တစ်ချိန်လုံး လူအခွင့်အရေး၊ အမျိုးသားရေးနဲ့ ဆုံးဖြတ်နေတာမဟုတ်ပဲ အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီး လက်ဝဲယိမ်းလိုက် လက်ယာယိမ်းလိုက် လုပ်ကြတာပါပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအရ ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပေမဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ အဓိက ပြိုင်ကြတာကတော့ NLD နဲ့ USDP ပါပဲ။ ပြောရရင် လက်ဝဲက NLD ဖြစ်ပြီး လက်ယာက USDP ပေါ့။ ၂၀၂၀ မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက လက်ဝဲဖက်မှာဆို NLD နောက် ဦးကိုကိုကြီးရဲ့ People’s Party ပေါ့။ လက်ယာဖက်မှာဆို USDP အပြင် ဦးရွှေမှန်းရင် UBP ဆိုပြီး နှစ်မျိုးဆီလောက်ရှိနေတယ်။ NLD နဲ့ People’s Party ဆိုရင်တော့ NLD က လူသိပိုများပြီးတယ် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်နေတာဆိုတော့ NLD…
သေချာတာတော့ ပြည်တွင်းခရီးမှာ Cashless သွားလို့မရပါဘူး။ Less cash ခရီးသွားလို့ပဲရပါလိမ့်မယ်…
4 years ago I don’t even haveabank account. But now…
ဟိုးအရင်တုန်းက မိသားစုလိုက်ခရီးထွက်ရင် ပိုက်ဆံဆို အထပ်လိုက်ထည့်ပြီးသွားရပါတယ်။ ခရီးသွားရင်း အရေးပေါ်ပိုက်ဆံရင်တောင် ဘဏ်ရှိတဲ့မြို့သွား အသိတစ်ယောက်ကိုဖုန်းဆက် ပိုက်ဆံလွှဲခိုင်းပြီး စောင့်ယူရပါတယ်။ အခုခေတ်မှာတော့ ဒါမျိုးတွေမရှိပဲ mobile banking တွေ mobile payment တွေ card တွေပေါင်းစုံနဲ့ အရင်တုန်းကလောက် မခက်ခဲတော့တာအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လုံးဝပိုက်ဆံမကိုင်လို့ရလားဆိုတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်သမျှ cashless လုပ်ပြီး ငပလီကို ၂ ညအိပ် ၃ ရက်ခရီးသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံး လေယာဉ်လက်မှတ်ကို flymya ကနေဝယ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေက ထုံးစံအတိုင်း cancel ဖြစ်တာတွေများလို့ တစ်ခါတည်း checkout မလုပ်ပဲ confirm ဖြစ်မှ ပေးတာပိုအဆင်ပြေတယ်။ confirm ဖြစ်တာနဲ့ ဖုန်းဝင်လာပြီး ပိုက်ဆံကို ဘယ်ကပေးမလဲမေးပါတယ်။ KBZ ကနေလွှဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ ငွေမလွှဲခိုင်းပဲ QuickPay ဆိုတာကနေ reference id ရိုက်ထည့်ပြီး flymya ကိုတစ်ခါတည်းပေးလို့ရတယ်။ လက်မှတ်ကို email ပြန်ပို့တာ နည်းနည်းကြာတာကလွဲရင် အကုန်အဆင်ပြေတယ်။ cashless တင်မက paperless ပါဖြစ်သွားတာကို တော်တော်လေးသဘောကြတယ်။
နောက် hotel booking လုပ်တော့ booking.com ကနေလုပ်ဖြစ်တယ်။ အပြင်ကထက်တောင်စျေးသက်သာတယ်။ တစ်ခါတည်း ပိုက်ဆံချေစရာမလိုပေမဲ့ fraud booking မဖြစ်အောင် card တောင်းပါတယ်။ VISA card သုံးပြီး ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံမဖြတ်ပါဘူး။ အကယ်၍ booking cancel လုပ်မယ်ဆိုဖြတ်မယ်ထင်ပါတယ်။…
Software တွေဟာ များသောအားဖြင့် bug fixes တွေ feature အသစ်တွေ နောက်ဆုံး complete rewrite တွေပြန်လုပ်ပြီး အမြဲ update တွေထွက်လာတယ်။​ Software ရေးရင်လဲ များသောအားဖြင့် update လုပ်နေရတယ်။
Application တွေစရေးတုန်းက update ပေးတဲ့အခါ 1, 2,3ဆိုပြီးတိုးသွားတာပေါ့။ နောက်ပိုင်း 1.1, 1.2 ဆိုပြီးလုပ်ပေမဲ့ version code မှာတော့ 1, 2,3ပဲလုပ်တာပေါ့။ အဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ consistant မဖြစ် မှတ်ရခက်ပြီး version တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာကွာလဲဆိုရင် အလွယ်တကူ စဉ်းစားလို့မရပဲ documentation ပြန်ကြည့်ရတာမျိုးတွေ ကြုံရတာပေါ့။
Semantic Versioning ကတော့ ဒီလို version ကိုဘယ်လိုပေးရမှန်းမသိတဲ့ ပြဿနာတွေကို​ ရှင်းပေးတဲ့ version standard တစ်ခုပါ။ မလိုက်နာလဲ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လိုက်နာရင်တော့ ပိုသပ်ရပ်တာပေါ့။ semantic versioning ကို major, minor, patch ဆိုပြီး အဓိက ၃ ပိုင်းခွဲထားတယ်။ “1.4.2” ဆိုတဲ့ version မှာ major က 1, minor က 4, patch က2ပေါ့။​
အရင်ဆုံး patch ကနေစကြည့်ရအောင် ကိုယ့် app ကို 1.0.0 ဆိုပြီး release လုပ်လိုက်ပြီဆိုပါဆို့…
လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္အထိကၽြန္ေတာ့မွာ ဘဏ္အေကာင့္မရိွ debit card မရိွ ဘာမွမရိွပဲ ပိုက္ဆံဆို ဒီတိုင္းကိုင္သံုးခဲ့တယ္။ နည္းနည္းမ်ားရင္ ေဒၚလာဝယ္ထားတယ္။ မတတ္သာလို႔ ဘဏ္က ေငြလႊဲလက္ခံရမွ ဘဏ္မွာ နာမည္ မွတ္ပံုတင္ နဲ႔လႊဲခိုင္းတယ္။
ေနာက္ပိုင္း ATM ေတြ mBanking ေတြသံုးလာၾကေတာ့ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ထားရတာ ပိုအဆင္ေျပေၾကာင္းသိလာတယ္။ ဒါေတာင္ တစ္ခါတစ္ေလ ဘဏ္ေတြနဲ႔ဆက္ဆံရတာ အဆင္မေျပတာေတြ အမ်ားႀကီးရိွေသးတယ္။ ဘဏ္တစ္ခု တစ္မ်ိဳးစီ ညံ့ၾကတယ္။
နိုင္ငံျခား payment ေလးလုပ္ျခင္ေတာ့ VISA debit card ပါေလ်ွာက္လိုက္ေသးတယ္။ မသိတာေတြကို VISA page မွာသြားေမးေတာ့ debit card ကသူတို႔နဲ႔မဆိုင္တဲ့။ သူတို႔က credit card ပဲလုပ္တာတဲ့။ မသိရင္ ဘဏ္ကထုတ္ေပးထားတာ အတုကဒ္ၾကေနတာပဲ။ ကဒ္ေပၚမွာပါတဲ့ VISA logo ကိုမွ အားမနာ။
MPU ေတြနဲ႔ online payment ရေတာ့စမ္းၾကည့္တယ္။ အရင္ဆံုး online မွာသံုးဖို႔ request လုပ္ရတယ္။ ခဏေနေတာ့ဖုန္းဝင္လာၿပီး personal information ေတြေမးတယ္။ သူတို႔က AYA ကပါဆိုတာကို ဘယ္လိုယံုရမလဲ။ ေမးတာႀကီးက social engineering ႀကီးၾကေနတာပဲ။ MPU payment ကေတာ့ 2C2P ေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ေလးအဆင္ေျပတယ္ေျပာလို႔ရတယ္။ အျပစ္ေျပာစရာဆိုလို႔ mobile friendly မျဖစ္တာပဲရိွတယ္။
Mobile Wallet ေတြအျပိဳင္အဆိုင္ေခတ္စားလာေတာ့ အဲ့ထဲမွာ ေၾကာ္ျငာအားအေကာင္းဆံုးျဖစ္တဲ့ OK $ ကိုသံုးျဖစ္တယ္။ ဖြင့္လိုက္တာနဲ႔ရိွသမ်ွ permission အကုန္ေတာင္းေတာ့တာပဲ။ App ကလဲ UI/UX ညံ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖုန္းေဘဝယ္ရတာ တစ္ျခား ကားလတ္မွတ္ေတြဘာေတြ အဆင္ေျပေတာ့ သံုးျဖစ္တယ္။ MPU က transcation fee မ်ားရင္ OK $ ကိုသံုးျဖစ္တယ္။
နာမည္ႀကီးစားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာလဲ MPU logo ေတြ VISA logo ေတြသာတပ္ထားတာ တကယ္ရွင္းရင္ Transcation fee ေပးရတာနဲ႔ လုိင္းမေကာင္းလို႔ဆိုတာနဲ႔ ပိုက္ဆံကိုင္ရတာေလာက္ကို အဆင္မေျပဘူး။
ဒါကေတာ့ error ေပါင္းစံုနဲ႔ ျမန္မာျပည္ payment အေၾကာင္းပါပဲ။
YBS ကိုမစီးရပေမဲ့ ၂၀၁၇ မှာ နေ့တိုင်းနီးပါး အပြင်ထွက်နေရတာကြောင့် YBS ကိုလမ်းမှာ တွေ့ရပြန်တယ်။ ထူးထူးခြားခြား သတိထားမိတာက ကားအသစ်တွေဆို စည်းကမ်းပိုရှိလာပါတယ်။ အရင်ကားအဟောင်း mini bus အများစုကတော့ ကြမ်းတုန်းပါပဲ။ နောက်ပြီး မှတ်တိုင်တွေမှာ ကားတွေများလာပါတယ်။ ခရီးသည်တွေအတွက်တော့ ပိုကောင်းလာပေမဲ့ မှတ်တိုင်တွေမှာ ၂ ထပ်သုံးထပ်ရပ်ပြီး လမ်းတော်တော်ပိတ်ပါတယ်။ တန်းစီတဲ့အလေ့အကျင့်ရှိရင်ပိုကောင်းမှာပါ။ ခရီးသည်တွေကလဲ ယခင်အတိုင်းပဲ ကားလာရင် တိုးဝှေ့တက်ကြပြီး အခုထိ တန်းမစီတတ်သေးပါဘူး။ မှတ်တိုင်တွေက သေးပြီး ခရီးသည်တွေက များနေတဲ့အတွက် မှတ်တိုင်မှာ လူအုပ်ကြီးဖြစ်ပြီး ဘတ်စ်ကား ရပ်စရာနေရာတောင်မရှိလို့ လမ်းလယ်မှာရပ်ပြီး တင်ရတာလဲ ခဏခဏတွေ့တုန်းပါပဲ။ နောက်တစ်ချက်က မှတ်တိုင်မှာ ရပ်တဲ့ တက္ကစီတွေပါ။ မှတ်တိုင်မှာ မရပ်ရတာကိုမသိတာပဲလား။ ဘယ်သူသေသေငတေမာရင်ပြီးရောစိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲရပ်သလားမသိပါ။ မှတ်တိုင်မှာ တက္ကစီတွေရပ်ထားတာကြောင့် ဘတ်စ်ကားတွေ ၂ ထပ်ရပ်ရပြန်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ YBS မောင်းပြီး မှတ်တိုင်မှာရပ်ထားတဲ့…
Google should improve Inbox’s UX.
It was at the midnight when I received an important email that I needed to forward to my partner. I was too lazy to open my laptop for suchasimple task as email forwarding and it was my phone that notify me. So, I unlocked my phone, open Google’s Inbox App. I use Inbox because it isalot simpler than iOS default mail app and Gmail. I read the mail, opened the attached pdf which I prefer to see file size before opening because I just want to. But I couldn’t.
Am I the only one around here who wants to know the file size before downloading
Then the problem the came when I…
Same thing happened to me in 2015 when I started learning iOS development. Apple announced Swift programming language in 2014 WWDC. At that time, I didn’t know both Objective-C or Swift. Most of the senior programmers recommended me to learn Swift. It wasn’t too difficult to learn swift since I already knew Java. But it was painful to read through documentation because the swift community wasn’t large enough.
And most of the libraries were written in Objective-C. Although I could use those libraries without knowing Objective-C, I wasn’t able to change them.
So, if you are new to programming or…
အသက်ရှည်ရှည်နေရမယ်ဆိုတာ ဘယ်နနှစ်အထိလဲ။ လူတစ်ယောက်ပျမ်းမျှသက်တန်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတာ ရှာကြည့်တယ်။ ကမ္ဘာမှာတော့ ပျမ်းမျှ ၇၀ ကျော်ဖြစ်ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ၆၅ နှစ်ဝန်းကျင်ပဲ။ ကင်ဆာအဖြစ်များဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုအတွက် ၆၅ နှစ်ဆိုတာ များတောင်များနေသေးတယ်။ အသက်ရှည်ရှည်ဆိုတာ programmatically ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ > 65 ပေါ့။
ဒီတိုင်းသွားရင် ၆၅ နှစ်အထိနေရပါ့မလား စဉ်းစားမိတယ်။ အိပ်ချိန်မမှန်စားချိန်မမှန် ကွန်ပျူတာရှေ့အနေများနေတာ lifestyle မပြောင်းရင်တော့ ၆၅ အထိတောင်မခံလောက်ဘူး။ လူချစ်လူခင်ကလဲများတယ်ဆိုတော့ လူငယ်သဘာဝ ကြည့်မရလို့ဆိုပြီး လုပ်ကြံခံရနိုင်သေးတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်က အသက် ၆၀ ကျော် အဘိုးကြီးတွေကို ကြည့်ပြီး ငါသာလူတို့အရွယ်လောက်ရောက်ရင် ဘာဖြစ်နေမှာလဲတွေးမိတယ်။ စိတ်ကူးပေါက်လို့ မနက်စောစော လမ်းလျှောက်ဖြစ်ရင် လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ကျန်းကျန်းမာမာ အဘိုးကြီးတွေ အုပ်လိုက်တွေ့တယ်။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေထင်ပါရဲ့ ဘယ်အရွယ်ထဲကပေါင်းလဲတော့မသိဘူး။ သူတို့ကိုကြည့်ပြီး ငါသာ အသက်ကြီးလို့မသေခဲ့ရင် သူငယ်ချင်းတွေပါရှိနေစေချင်သေးတယ် ဆိုပြီး တွေးမိပြန်တယ်။
အသက်ကြီးပဲအလုပ်လုပ်နိုင်သေးတဲ့ သူတွေကိုလဲတွေ့တယ်။ ပြင်ဦးလွင် feel မှာဆို manager အဆင့်လောက်ရှိမလားမသိဘူး အသက်ကြီးကြီးအရပ်ရှည်ရှည်လူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ feel နှစ်ဆိုင်လုံးမှာ လုပ်တယ်။ အရပ်ရှည်ရှည်နဲ့ သွက်သွက်လက်လက်ဖြတ်ဖြတ်လပ်လပ်ရှိတုန်းပဲ။ မန်နေဂျာဆိုပြီးထိုင်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး စာပွဲခုံသုတ်စရာရှိလဲသုတ်လိုက်တာပဲ waiter လုပ်ရင်လဲ လုပ်လိုက်တာပဲ။ စစ်သားဟောင်းလားမသိဘူး။ အဲ့လိုမျိုးလဲဖြစ်ချင်တယ်။
နောက်အသက်ကြီးပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်တာရှိသေးတယ်။ သားသမီးကမထောက်ပံ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် တုန်တုန်ချိချိနဲ့ပိုက်ဆံရှာရတဲ့အဘိုးကြီးတွေလဲတွေ့ဘူးတယ်။ သူတို့လုပ်ချင်မလုပ်ချင်တော့မသိဘူး။ ဘေးကကြည့်ရတာ မသက်သာလှဘူး။ အဲ့လိုမျိုးလဲမဖြစ်ချင်ဘူး။ အသက်ကြီးလာလို့ အလုပ်မလုပ်နိုင်ရင်တောင် စာလေးဖတ်လိုက် ရေးလိုက် အေးဆေးနားချင်တယ်။
နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့ အဆိုးဆုံးပဲ။ ပိုက်ဆံရှိရှိ မရှိရှိ ရောဂါအမျိုးမျိုးကြောင့် ကုတင်ပေါ်တစ်ချိန်လုံးလှဲနေရတာမျိုး။ ဘာမှလဲမလုပ်နိုင်ပဲ သေမဲ့နေ့ကိုစောင့်နေရတာမျိုး။ အဲ့ဒါမျိုးတော့မဖြစ်ချင်ဘူး။ အိပ်နေတုန်း အသက်ထွက်သွားတာမျိုးနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်အသက်ထွက်သွားချင်တယ်။ ဆေးရုံတစ်ခါတစ်လေသွားရတာမျိုးက ကိစ္စမရှိပေမဲ့ တစ်ချိန်လုံးမနေနိုင်ဘူး။
အသက်ရှည်ရှည်နေရဖို့ အထူးတလည်မမျှော်လင့်ပဲ အကယ်၍များ အသက်ရှည်ရှည်နေရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး၊ ဒါမှမဟုတ် ဖြတ်ဖြတ်လတ်လတ် အလုပ်လုပ်နေပြီး ဒါမှမဟုတ် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း စာဖတ်လိုက်ရေးလိုက်သာ နေချင်တယ်။